G.H. Luce အကြောင်း | Sizangkam
← The Goal of This Site
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို သင်ပေး၍ ဗမာပြည်၏တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကရင်စကားရယ်၊ မွန်စကားရယ်၊ ဗမာစကားရယ်၊ ချင်းလူမျိုးတို့၏ ဘာသာစကားများကိုရယ်၊ အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှဘာသာစကားများကိုရယ် သုတေသနပြုခဲ့ပါသည်။
ချင်းဘာသာစကားများနှင့်ပတ်သက်၍ စကားလုံးစာရင်းများကို၎င်း၊ ဆောင်းပါးများကို၎င်း၊ စာအုပ်များကို၎င်း ရေးခဲ့ပါသည်။ စကားလုံးစာရင်းများကိုကြည့်ရှုရန် SEAlang ဆိုတဲ့ websiteသွားခဲ့ကြပါ။ ဤ website၌လည်း သူ့ရေးထားသည့် ဆောင်ပါးတစ်ကြောင်း ထည့်လိုက်ပါမည်။ အကယ်ပြောမည်ဟူလျှင် မေးခွန့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမည်က “Chin Hills — Linguistic Tour (Dec. 1954) — University Project”ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမေးခွန့်ထဲ၌ သူရဲ့ ချင်းတောင်တန်းများ၌ သွားခဲ့သည့် ခရီးအကြောင်းနဲ့ ဘာများကို တွေ့ကြုံသနည်းဟူမူကိုပြောပြသည်။ ပြဿနာတစ်ခုက ဒီမေးခွန့်က လုံးဝ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါသည်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မဖတ်တတ်သည့် သူများအတွက် နားလည်ရန် ခက်ခဲမှု ခံစားရလိမ့်ပါမည်။
Sizangkamကို သာ၍လေ့လာနိုင်ရန် Luce၏ ဆောင်းပါးများကို သုံးပြုနေ၍ ကျွန်တော်၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို Sizang innkuan နှင့် ဝေမျှချင်ပါသည်။ ဥပမာ တစ်ခုပေးပါမည်။ ဆရာ Luceသည် စကားလုံးစာရင်းတွေရေးသောအခါ IPA (International Phonetic Alphabet / ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသံထွက်အရ အက္ခရာ) ကိုသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ IPA အက္ခရာနှင့် ဘာကြောင်းသနည်းဟူမူကား ဤ အက္ခရာကိုဖတ်သောအခါ အဘယ်နည်း မှန်မှန်ကန့်ကန့် သံထွက်သင့်သနည်းဟူမူကို သိနိုင်ပါသည်။ Sizang အက္ခရာက ကောင်းပါသည်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားအနေနှင့် “bong” ကိုဖတ်သောအခါ ဘာအဓိဟ္ပယ်ရသနည်းဟူမူကို မသိပါ။ “မဟုတ်”ဟုလော။ “ကုန်သွားပြီ”ဟုလော။ သိလို့မရပါ။ ဒါပေမဲ့ ဤကဲ့သို့ [boŋ˥] ရေးမည်ဟူမူလျှင် အသံထွက်ကို သိလို့ရပါသည်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်တွင် website တစ်ခုပေါ်၌ Sizang kam အတွက် Digital Linguistic အဘိဓာန်တစ်ခုကို လုပ်ချင်ပါသည်။ အခုလည်း ကျွန်တော် Luce၏ စကားလုံးများ စရေးနေပါပြီ။ ကြည့်ပါဦး။
ခင်ဗျားတို့ကိုလည်း ကူညီစေချင်ပါသည်ဗျား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီနိုင်သလောက် ကူညီပေးကြပါဦး။
Zingpha le Topa thupha maw!
Mang Sian Khual
4 Responses to G.H. Luce အကြောင်း
Tuangpu Siyin says:
Font အဆင္​​ေျပရဲ႕လား သူငယ္​ခ်င္​း။
ကၽြန္ေတာ့္ office computer မွာေတာ့ Font အစဥ္မေျပဘူး၊ အိမ္ေရာက္ရင္ အစဥ္ေျပမယ္ထင္တယ္။ အိမ္မွာေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီ ယူနီကုတ္ သံုးထားတယ္….
ဒီ ဆိုက္မွာ ေဇာ္ဂ်ီသုံးလို႔မရဘူးဗ်။ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ပဲသုံးလို႔ရပါတယ္ဗ်။ အဆင္ေျပရင္ ဒီကို (https://sizangkam.wordpress.com/zawgyi-warning/) သြားၿပီး အဲဒီ plugin installလိုက္ပါ။ 🙂